सुरुसुरुमा धोती फालेर भात खान बाहुनलाई दकस लाग्थ्यो: बाबुराम
काठमाडौं, कात्तिक २८ - नयाँशक्ति नेपालको तर्फबाट गोरखा क्षेत्र नम्बर दुईमा प्रतिनिधिसभाका लागि उम्मेदवार बनेका नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक बाबुराम भट्टराईले सबै माओवादीहरु विस्तारै आफ्नो लाइनमा आउने बताएका छ्न् । उनले ब्राह्मण समुदायले धोती फेरेर भात खाने प्रसंग उल्लेख गर्दै माओवादीहरु नयाँ शक्तिको लाइनमा आउने बताए । गोरखाको पालुङटार पुगेर उनले यस्तो बताएका हुन् ।
यसो भने बाबुरामले
पहिले पहिले ब्राह्मणहरु सबै धोती फेरेर भात खान्थे, अहिले धेरैले त्यत्तिकै खान्छन । धोती नफेरी खाँदा सुरुसुरुमा बुढाहरुलाई दकस पनि लाग्यो तर पछि बिस्तारै बानी पर्‍यो । अहिले माओवादी साथीहरुलाई त्यस्तै भएको छ, छोडिहाल्न दकस पनि लागेको छ, भित्रैदेखि छोड्न मन पनि लागिरहेको छ । प्रचण्डजीले त एक्लैमा कुरा गर्दा (मेरो अपरेशन भएको बेला घण्टौं कुरा गर्दा) खुलेरै बाटो त तपाईंकै ठीक हो, कुनै दिन हाम्रो भेट हुन्छ भन्नुभएको छ । बाहिर मात्रै अरु कुरा गर्नुहुन्छ । ब्राह्मणलाई सुरुमा धोती नलाई भात खान दकस लागेजस्तै उहाँहरूलाई पनि दकस लागेर नै कम्युनिस्ट केन्द्र निर्माणको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ । तर एकदिन उहाँहरु पनि लुगा लाएरै भात खान सुरु गर्नुहुन्छ । कम्युनिस्ट केन्द्र निर्माण अहिले सम्भव छैन । राजनीतिक रुपमा पनि सबैले बहुदलीय व्यवस्था स्वीकार गरिसकेको र आर्थिक रुपमा पनि राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्र सम्भव छैन । उहाँहरु ढिलोचाँडो मेरै बाटोमा आउनुहुन्छ ।
को हुन् ‘द भ्वाइस अफ नेपाल’को उपाधि जित्ने सी.डी. विजय अधिकारी ? काठमाडौं– युवा पुस्तामा लोकप्रिय गायन रियालिटी सो ‘द भ्वाइस अफ नेपाल’को उपाधि सी.डी विजय अधिकारीले जितेका छन् । कतारको दोहास्थित एसियन टाउन ग्रान्डमल सनैयामा...